Ekipa mpanao heloka bevava
Serivisy ho an'ny heloka bevava
Fikarohana / lahatsoratra
Andriamatoa Tian sy ny ekipany dia mifantoka indrindra amin'ny fanomezana serivisy ara-dalàna mifandraika amin'ny vahiny amin'ireo mpanjifa manao raharaham-barotra na miaraka amin'i Sina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ny serivisinay dia miorina amin'ny sokajy roa mifototra amin'ny karazana mpanjifa: serivisy ho an'ny mpanjifa orinasa, ary serivisy ho an'ny olona, ​​ao anatin'izany ireo mpitsangatsangana any Shina, indrindra any Shanghai.
Ho an'ny mpanjifa / orinasa orinasa
Amin'ny maha ekipa kely dia kely anay, tsy mirehareha momba ny serivisy ara-dalàna feno sy feno izahay, fa kosa mila manasongadina ny fifantohanay sy ny tanjakay ahafahanay manao tsara kokoa noho ny hafa.
1. Fampiasam-bola mivantana any ivelany any Sina
Manampy ireo mpampiasa vola vahiny izahay amin'ny fanatontosana ny asan'izy ireo voalohany any Shina amin'ny alàlan'ny fananganana orinasam-pandraharahana any Shina, ao anatin'izany ny birao solontena, sampana orinasa, orinasa iraisan'ny vahiny sinoa (orinasa JV na JV fifanarahana), WFOE (orinasa manana orinasa vahiny), fiaraha-miasa , famatsiam-bola.
Ho fanampin'izay, manao M&A izahay, manampy ny mpampiasa vola vahiny amin'ny fahazoana orinasa anatiny, orinasa ary fananana miasa.
2. Lalànan'ny trano sy tany
Ity dia iray amin'ireo sehatr'asa fanaovan-tsika izay namboarinay sy narafinay traikefa nanan-karena sy fahaizana manokana. Manampy ny mpanjifa izahay amin'ny:
(1) mandray anjara amin'ny fizotran'ny tolotra ampahibemaso amin'ny fivarotana fampiasana tany azony amin'ny fahazoana tany tadiavina ho fampiroboroboana trano na indostrialy toa ny fananganana orinasa, trano fanatobiana entana sns
(2) fitetezana amin'ny lalàna sy lalàna mavesatra sy mazy mifandraika amin'ny fampandrosoana ny tetik'asa, trano na trano ara-barotra, indrindra ny lalàna momba ny faritra sy ny fananganana tanàna;
(3) fahazoana sy fividianana fananana efa misy, tranobe toy ny trano fandraisam-bahiny, trano misy birao ary fananana ara-barotra, ao anatin'izany ny fanaovana famotopotorana tsara momba ny fananana resahina, ny firafitry ny fifanarahana, ny hetra ary ny fitantanana fananana;
(4) famatsiam-bola amin'ny tetikasa trano, indram-bola amin'ny banky, famatsiam-bola;
(5) fampiasam-bola amin'ny fananana sinoa, mitady fotoana amin'ny anaran'ny mpampiasa vola vahiny hamerenana, hanamboatra ary hamerina hamidy ireo fananana ireo.
(6) fanofana trano / trano, fanofana trano ho an'ny trano, birao ary indostrialy.
3. Lalànan'ny orinasa ankapobeny
Mikasika ny serivisy ara-dalàna ataon'ny orinasa ankapobeny, matetika izahay dia manao fifanarahana isan-taona na isan-taona amin'ny mpanjifa izay anomezanay entana isan-karazany amin'ny serivisy fanaraha-maso ara-dalàna, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
(1) fiovan'ny orinasa ankapobeny eo amin'ny sehatry ny orinasa, ny adiresin'ny birao, ny anaran'ny orinasa, ny renivohitra voasoratra anarana, ny fanombohan'ny sampana orinasa;
(2) torohevitra momba ny fitantanana orinasa, famolavolana lalàna mifehy ny fiasan'ny fivorian'ny tompon-trano, ny fivorian'ny birao, ny solontenan'ny lalàna ary ny tale jeneraly, ny lalàna mifehy ny fampiasana tombo-kase / orinasa, ary ny lalàna mifehy ny fandrindrana ny fitantanana;
(3) manoro hevitra momba ny olana momba ny asa sy ny asa ataon'ny mpanjifa, ny famerenana ny fifanarahana momba ny asa sy ny lalàna mifehy ho an'ny mpiasa amin'ny ambaratonga samihafa, ny famolavolana ny boky torolàlana ho an'ny mpiasa, ny fandroahana faobe ary ny fitsarana sy ny raharaham-pitsarana;
(4) manoro hevitra, mandrafitra, mandinika, manatsara ny karazana fifanarahana asa aman-draharaha ampiasain'ny mpanjifa miaraka amin'ny antoko fahatelo;
(5) manoro hevitra momba ny olan'ny hetra momba ny orinasan'ny mpanjifa.
(6) manome torohevitra ara-dalàna momba ny paikadim-pampandrosoana an'ny mpanjifa any amin'ny tanibe Shina;
(7) manome torohevitra ara-dalàna momba ny zon'ny fananana ara-tsaina, ao anatin'izany ny fangatahana, famindrana ary fahazoan-dàlana hananana patanty, mari-barotra, zon'ny mpamorona sy ny hafa;
(8) fangatahana indray ny trosa azo amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasy mpisolovava amin'ny anaran'ny mpanjifa;
(9) fandrafetana, famerenana ny fifanarahana momba ny fanofana na ny fifanarahana fivarotana fananana nampanofaina na an'ny mpanjifa ho an'ny biraony na ny toby famokarana;
(10) fifampiraharahana amin'ny mpanjifa mpanjifa fitakiana tsy fitiavana, ary fanomezana fakan-kevitra momba ny lalàna mifandraika amin'izany;
(11) mandrindra sy manelanelana ny fifanolanana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny mpitondra fanjakana;
(12) manome fampahalalana momba ny lalàna momba ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny PRC momba ny asan'ny mpanjifa; ary ny fanampiana ny mpiasany hanana fahatakarana tsara kokoa momba an'io;
(13) mandray anjara amin'ny fifampiraharahana eo amin'ny Mpanjifa sy ny antoko fahatelo momba ny raharaha fampiraisana, fahazoana, fiaraha-miombon'antoka, famerenana amin'ny laoniny, fiaraha-miasa amin'ny orinasa, famindrana ny fananana sy ny trosa, ny tsy fahazoana vola ary ny famonoana;
(14) manao fanadihadiana amin-kafanam-po amin'ny mpiara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny firaketana an-tariby an'ireo mpiara-miasa toy izany voatazona amin'ny biraon'ny indostria sy varotra eo an-toerana;
(15) manome serivisy ara-dalàna momba sy / na mandray anjara amin'ny fifampiraharahana momba ny fifanolanana sy ny fifanolanana;
(16) manome serivisy fanofanana ara-dalàna sy lahateny momba ny lalànan'ny PRC amin'ny fitantanana sy ny mpiasa ataon'ny mpanjifa.
Manampy ny mpanjifa iraisam-pirenena izahay amin'ny fanaovana arbitration sy ny fitsarana any Shina amin'ny fikatsahana, fiarovana ary fiarovana ny tombotsoany any Shina. Misolo tena ny mpanjifa iraisam-pirenena izahay amin'ny ankamaroan'ny karazan'ady izay iharan'ny fahefan'ny fitsarana sinoa, toy ny fifanolanana, fiaraha-miasa, fifanarahana fivarotana sy fividianana iraisam-pirenena, fifanarahana famatsiana, fifanarahana fahazoan-dàlana IPR, fifanakalozana iraisam-pirenena ary fifanolanana ara-barotra hafa amin'ny antoko sinoa.
Ho an'ny olona / mpivahiny / vahiny
Amin'ity sehatry ny fampiharana ity dia manolotra serivisy isan-karazany momba ny lalàna sivily izay ilain'ny mpanjifa tsirairay matetika izahay.
1. Lalànan'ny fianakaviana
Nanampy vahiny na mpitsoa-ponenana maromaro tany Sina aho tamin'ny olan'izy ireo nipoitra teo amin'ny mpivady sy ny mpianakavy. Ohatra:
(1) fandrafetana ny fifanarahana alohan'ny fanambadiana miaraka amin'ny ampakarin'izy ireo sy ny mpampakatra izay matetika dia lehilahy na vehivavy sinoa, ary manao drafi-pianakaviana hafa amin'ny fiainam-panambadiana amin'ny ho avy;
(2) manoro hevitra ny mpanjifa amin'ny fisaraham-panambadiany any Shina amin'ny alàlan'ny famolavolana ny paikadin'ny fisaraham-panambadiana amin'ny fiarovana ny tombotsoany amin'ny sehatry ny fahefana marobe tafiditra amin'ny fizotrany izay matetika manasarotra ny fizotry ny fisaraham-panambadiana; manoro hevitra ny amin'ny fisarahana, fizarazarana ny fananana ara-panambadiana, ny fananan'ny fiarahamonina;
(3) manoro hevitra momba ny fitandremana ny zaza, ny fitandremany ary ny fikojakojana azy;
(4) serivisy fandrindrana ny teti-pianakaviana momba ny fananana na fananana any Shina alohan'ny fandroahana.
2. Lalàna lova
Manampy ny mpanjifa amin'ny lova izahay, amin'ny sitrapo na amin'ny lalàna, ireo fananana nolovaina na navelan'ny malalany, ny havany na ny namany. Ny fananana toy izany dia mety ho fananana, petra-bola, fiara, tombontsoam-bola, fizarana, vola ary karazana fananana na vola hafa.
Raha ilaina dia ampianay ny mpanjifa amin'ny fanatanterahana ny lovany amin'ny alàlan'ny fanenjehana ny fitsarana izay mety tsy hankahala mihitsy raha toa ka mifanaraka amin'ny tombotsoany ireo antokony.
3. Lalànan'ny trano sy tany
Manampy ny vahiny na mpivahiny amin'ny fividianana na fivarotana ny fananany any Shina izahay, esp fananana any Shanghai izay misy anay. Manoro hevitra an'ireo mpanjifa izahay amin'ny fizotry ny varotra na fividianana toy izany amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo amin'ny famaritana ny fepetra sy ny fifanakalozana ary ny fahitana ny fifanarahana fifanarahana.
Mikasika ny fividianana trano any Shina dia ampianay ny mpanjifa hahatakatra ny fetran'ny fividianana entana amin'ny vahiny, hifampiraharaha amin'ny antoko mifandraika amin'izany, toy ny realtors, mpivarotra ary banky ary hiatrika ny olana momba ny fifanakalozam-bola vahiny tafiditra ao anatin'izany.
Mikasika ny fivarotana trano any Shanghai, Sina, dia tsy vitan'ny hoe manampy ny mpanjifa hanao fifanarahana fifanarahana amin'ny mpividy izahay, fa manampy azy ireo koa hamadika ny vola azo avy amin'ny varotra ho fifanakalozana ivelany toy ny dolara amerikana ary hampita izany any Chine amin'ny tanindrazany.
4. Lalàna momba ny asa / asa
Eto ihany koa izahay dia matetika manampy ny mpiasa miasa any Shanghai hiatrika ny mpampiasa azy raha misy ny fifanolanana toy ny fandroahana tsy ara-drariny sy ny karama ambany.
Raha jerena ny fihetsika miangatra amin'ny lalànan'ny fifanekena momba ny asa any China sy ny lalàna tsy mitombina hafa, ho an'ireo mpitsoa-ponenana maro izay mahazo karama be any Chine, raha vao misy ny fifanolanana amin'ireo mpampiasa dia matetika ireo mpiasa no avela ao anatin'ny toe-javatra mahamenatra izay tsy maintsy hiankohofany alohan'ny hahatsapan'ny mpampiasa azy fa tsy voaro loatra izy ireo eo ambanin'ny lalànan'ny asa Sinoa mihitsy. Noho izany, ho fiheverana ireo loza mety hitranga mifandraika amin'ny asa ataon'ny mpiasa any Shina, dia manentana ireo mpiasa vahiny miasa any Shina izahay mba ho tonga ara-dalàna miaraka amin'ireo orinasan'izy ireo mba tsy ho voan'ny toe-javatra sarotra any Shina.
5. Lalànan'ny ratra manokana
Niatrika tranga maratra manokana nahitana vahiny maratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana na ady tototra izahay. Tianay ny hampitandrina ny vahiny any Shina mba hiambina hatrany amin'ny fandratrana any Shina satria araka ny lalàna momba ny fandratrana manokana ataon'ny Sinoa dia tsy ho eken'ny vahiny ny tambiny natolotry ny fitsarana sinoa azy ireo. Na izany aza, zavatra ity dia mila fiovana maharitra.
Misoratra amin'ny mailaka maimaim-poana hahazoana vokatra farany sy fampahalalana fihenam-bidy.
Solontenan'ny orinasa China, Firenena misahana ny fisaraham-panambadiana any Sina, Orinasa misahana ny lalàna momba ny fianakaviana any Sina,